के चाहन्छन प्रचण्ड प्रधानमन्त्री कि अध्यक्ष ? | Ajako Aartha | Nepal's No. 1 Business News Portal
के चाहन्छन प्रचण्ड प्रधानमन्त्री कि अध्यक्ष ?
काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जिल्ला तहको नेतृत्व टुंग्याएको केही समयपछि नै तल्लो तहको कमिटिलाई सम्मेलन गरेर फ्रेस नेतृत्व ल्याउने सोच बनाएको छ ।
सो पार्टीले आगामी एक वर्षभित्रे महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको छ । पार्टीभित्र सांगठनिक एकता प्रक्रियालाई टुंगो लगाएलगत्तै ६ महिनाभित्र सम्मेलन सम्पन्न गरेर एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको हो । तर सबै संगठित सदस्यहरूको लगत संकलनमै ६ महिना भन्दा बढी समय लाग्ने अवस्थामा यति छिटै सम्मेलन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको नेताहरूको दावी छ ।
पार्टी एकता भएको लामो समयपछि कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर नेकपाले ७७ जिल्लाका जिल्ला कमिटिका अध्यक्ष र सचिवको नाम सार्वजनिक गरेको छ ।
विगतमा एमाले र माओवादी केन्द्रबाट जिल्लाको अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएकाहरूलाई नै पार्टीले अध्यक्ष र सचिव बनाएको छ । पार्टीले दोहोरो जिम्मेवारी नदिने मापदण्ड बनाए पनि विवादको गाँठो फुकाउन भागवण्डाअनुसार अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लगाएको हो । अझै पोलिटव्यूरो गठन तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन लगायतका धेरै काम बाँकी रहे पनि महाधिवेशन पार्टीका ठूला नेतालाई हतार लागेको छ । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले भने यो विषयलाई कार्यकर्ताहरूको बीचमा सम्बोधन गर्दा प्राथमिकतासाथ उठाउन थालेका छन् ।
रवि लामिछानेलाई ५ दिन थुनामा राख्न अदालतको अनुमति